नेपालमा पहिलो पटक भेटियो हरित परेवा
चरा खोजकर्ता देवेन्द्र खरेलले मेचीनगरमा हरित परेवा प्रजातिको चरा फेला पारेका छन् । वैज्ञानिक नाम ‘डुकुला एनिया’ र अङ्ग्रेजी नाम ‘ग्रिन इम्पेरियल पिजन’ भएको उक्त चरा मेचीनगर नगरपालिका-७ को सतिघट्टामा सिमलको रूखमा भेटिएको उनले जानकारी दिए । उनले नेपालमै पहिलोपल्ट सो प्रजातिको चरा भेटिएको दाबी समेत गरे ।
पक्षी संरक्षण सङ्घ र चराहरूको बारेमा पुस्तक लेखक डा. हेमसागर बरालले उक्त चरा नेपालमा पहिलोपल्ट भेटिएको पुष्टि गरिसकेका छन् । ‘मैले यही ९ मंसिर बिहान ८ः३० बजेतिर चराहरूको खोजी गर्दै जाँदा सिमलको रूखमा चार वटा अनौठा परेवाजस्ता चरा देखेँ,’ खरेलले भने, ‘फोटो खिचेर पक्षी संरक्षण संघ र डा. बराललाई पठाएँ, त्यहाँबाट यो पक्षी हरित परेवा रहेको र पहिलोपल्ट भेटिएको पुष्टि गर्नुभयो ।’
चराहरूको खोजी र संरक्षणमा पाँच वर्षदेखि लागिरहेका उनी मेचीनगर-६ निवासी हन् । उनले झापा, इलाम, सुनसरी, चितवनलगायतका स्थानमा डुलेर पक्षीको तस्वीर खिच्ने र तिनको संरक्षणका लागि जनचेतना जगाउने काम गर्दै आएका छन् ।
नेपालमा ८ सय ८६ प्रजातिका चरा भएको आधिकारिक तथ्यांक छ । हरित परेवालाई अहिलेसम्म पाइने चराको सूचीमा राखिएको छैन । अब चराहरूको प्रजाति ८ सय ८७ पुगेको मान्नुपर्ने चरा खोजकर्ता खरेलले जानकारी दिए । घरेलु परेवाभन्दा १० सेन्टिमिटर लामो र दुवै पखेटामा चम्किँलो हरियो रङ हुने भएको हुँदा सो प्रजातिको परेवा ढुकुरभन्दा दोब्बर र घरेलु परेवाभन्दा निकै ठूलो आकारको हुन्छ ।
हरित परेवा पाइनु चरा संरक्षण र चरा पर्यटनका दृष्टिले ठूलो उपलब्धि मानिएको छ । मेचीनगरको मेची र नन्दा नदीको किनारका दलदले क्षेत्र र इलामसँगको सिमानामा रहेको चुरे जङ्गल क्षेत्रमा ३ सय प्रजातिका चराको बासस्थान भएको बताइन्छ । उनले ती चरालाई संरक्षण गरी पर्यटक आकर्षित गर्न सकिनेतर्फ राज्यको ध्यान जान आवश्यक रहेका बताए । रासस
नेपालसँगको निकटतम मित्रताबारे छलफल गर्छु : श्रृंगला